Keega Shukulaatada Seddexaad + Qaboojinta Shukulaatada (Laga soo bilaabo xoq) - Keega
Keeg shukulaatada seddexaad leh ganache shukulaatada ah ayaa riyo shukulaato jecel
Keeg shukulaatada seddexaad ah ayaa ahaa keega shukulaatada aan ugu jeclaa muddo dheer. Waxaan jeclaa jajabyada yar ee shukulaatada qaniinyo kasta. Waxaan ku lammaanayn jiray subag macaan runtiina waxay i xasuusisay koobkii Ding Dong ee yaraantaydii. Sanadihii la soo dhaafay waxaan bilaabay inaan ku lammaaneeyo midkoodna shukulaatada ganache ama shukulaatada buttercream . Waxaa laga yaabaa inay tahay da 'laakiin waxaan kaliya rabaa shukulaatada DHEERAAD ah keega seddexaad ee shukulaatada ah. Waxaan ula jeedaa… kolba inta shukulaatada badan sax tahay?
Maxaa ka dhigaya keegga shukulaatada saddex-geeslaha ah mid aad u wanaagsan?
Keeg shukulaatada seddexaad ah ma ahan mid qalbi jilicsan! Uma jeedin inaan ka dhinto qayb kasta oo ka mid ah keeggan macaan, kalluunka xumaaday! Waxaan si taxaddar leh u tijaabiyey cuntadan si qayb kasta oo keega ka mid ah loogu daro guud ahaan qoyaanka iyo jilicsanaanta keega.
sida loogu sameeyo makaroonada burka yicibta
Habka kareemka gadaal - wuxuu siinayaa keegan jajab aad u fiican oo jajab ah oo ku dhalaalaya afkaaga.
Budada kookaha la duubay - budada kookaha waxay leedahay dhadhan shukulaato ka xoog badan kookaha dabiiciga ah.
Majones - waxay siinaysaa keegga shukulaatada kor u kaca qoyaanka!
Sida loo sameeyo keega shukulaatada saddex-laab ah
Cuntadan keega shukulaatada ah ee seddexlaha ah waxaa laga soo qaatay kan aan ugu jeclahay karinta keega shukulaatada . Cuntadani keegga ah waxay isticmaashaa habka kareemada gadaal
Biyahaaga karkari oo ku shub budadaada kookaha. Hoos u dhig ilaa ay ka siman tahay. Ku dar majones (toos uga soo qaad qaboojiyaha) si ay u yara qaboojiso isku darka shukulaatada.
Kadib ku dar faniinkaaga iyo ukuntaada oo xoq si aad ukunta u jajabiso. Meel dhig si aad u qaboojiso.
Isku dar maaddooyinka qallalan (bur, sonkor, budada dubista, soodhaha, milixda) ee ku jirta weelka isku darkaaga istaaggaaga
Ku soo lifaaq lifaaqa baalashka oo ku dar hoos. Si tartiib ah ugu dar qaybahaaga jilicsan ee subagga iskuna qas ilaa ay uga egyihiin ciid aan dhab ahayn.
Ku dar qiyaastii 1/3 ee isku-darka shukulaatada isku-darka burka iskuna dar isku-darka 4-ta Kitchenaid-kaaga laba daqiiqo oo buuxa. Ii aamin, ha isku daro labada daqiiqo ee buuxda ama keeggaaga ayaa burburaya.
Xaaq weelka ka dibna ku dar inta hartay ee dareerayaashaada ah iskuna dar 30 ilbiriqsi oo kale ama wax la mid ah illaa aysan jirin wax xargo ah.
Ku shub baytarka laba 8 p digsi keega wareega ah oo lagu diyaariyey keega goop ama buufin digsi.
Ku dubi rootiga seddexaad ee shukulaatada ah 30 daqiiqo at 35oºF ama ilaa caday ka soo baxeyso xarunta iyadoo xoogaa googo 'gooey ah weli ku xiran yihiin. Ha badin dubista!
U oggolow keeggaaga inuu qaboobo 10 daqiiqo digsiga ka dib u soo celi qolka qaboojiyaha. Waxaan ku duuduubay caag oo waxaan uga tagayaa qolka hurdada si uu u barafoobo maalinta ku xigta maxaa yeelay keeggu wuu adag yahay laakiin sidoo kale waad barafoobi kartaa si aad ugu daboosho qoyaanka.
Waxaad ubaahantahay macluumaad dheeri ah sida loo sameeyo keegaaga ugu horeeya ? Fiiri casharradayda ku saabsan sida loo gooyo keegaaga, dhaxanta, u buuxi oo u qurxin. Dhamaan aasaaska bilowga ugu dambeeya!
Waa maxay qaboojinta ugu fiican ee ku jirta keega shukulaatada saddex-geesoodka ah?
Maaddaama ay tani tahay keegga ay jeceshahay inantayda, waxaan ka dhigay tii ay ugu jeclayd taas oo ah ganache shukulaatada. Waxay jeceshahay shukulaatada madow laakiin saaxiibadeed waxay doorbidaan caano. Waxaan sameeyay tanaasul waxaanan la aaday hilib shukulaato semi-macaan leh oo loogu talagalay ganache.
Ganache-kani waa 2: 1 cunto karinta sidaa darteed way ka jilicsan tahay kana jilicsan tahay ganache dhaqameedka aan u sameeyo keegga la jeexjeexay ama keega arooska.
sida loo sameeyo keega isku darka dhadhan fiican
Ka dib markaan sameeyo ganacsheeyga waxaan u daayaa inuu ku qaboojiyo heerkulka qolka leh balaastigga dusha sare. Haa waxaad kaga tagi kartaa ganache miiska dushiisa dushiisa kareemkuna ma xumaanayo. Sayniska cuntada!
Keegga shukulaatada seddex-geesoodka ah ee ugu cajaa'ibka badan leh shukulaatada barafoobay! Keeggan waxaa sida ugu fiican loogu adeegaa heerkulka qolka oo lagu qaboojiyaa shukulaatada buttercream ama ganache. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:35 daqiiqado Wadarta Waqtiga:konton daqiiqado Kalori:381kcal
▢3 oz (85.05 g) Budada kookaha Dutch
▢8 oz (226.8 g) biyo
▢3 ukumo waaweyn
▢14 oz (397 g) Daqiiqda keega aan la karin
▢shan iyo toban oz (425 g) sonkorta granulated
▢laba tsp budada dubista
▢1 tsp Fixiso
▢1 tsp cusbada badda
▢8 oz (227 g) shukulaatada yaryar ama shukulaatada la jarjaray
Shukulaatada Ganache Frosting
▢8 oz (227 g) kareemka karbaashka culus Kuleylka kuleylka, ha karkarin
▢16 oz (454 g) Chips-shukulaatada semi-macaan
Sii kululeyso foornadaada ilaa 335ºF. Diyaarso laba 8 'digsi keeg leh keega ama digsi kale oo la sii daayo. Waxaan door bidaa in aan ganacheetada shukulaatada ka dhigo maalin ka hor intaanan u baahnayn si aan u siiyo waqti ay ku qaboojiso.
Kari biyaha ku kari oo ku shub budada kookaha. Fog ilaa inta ay siman tahay ka dibna ku dar majones qabow, vanilj iyo ukumo. Jeex si aad u jebiso ukunta.
Isu miisaan dhammaan walxaha qallalan (bur, sonkor, budada dubista, soodhada iyo milixda) oo dhig dhig baaquli fiicni oo ku dheji lifaaqa suufka.
Meeris ku beddel hooseeya (dhig 1 dhadhamka Gargaarka jikada). Kudar subagga heerkulka qolka qaybo yaryar. Isku dar si hoose illaa aad ka gaarto isku darka bacaadka ah.
Ku dar 1/3 maaddooyinkaaga dareeraha ah walxahaaga qallalan iskuna qas dhexdhexaad ilaa 2 daqiiqo. Haddii aadan talaabadan qaadin, keeggaaga ayaa burburi kara.
Mashiinkaaga dib ugu soo celi hoos si hoose kuna dar inta hartay ee dareerayaashaada si tartiib ah. Joogso hal ama laba jeer si aad u xoqdo baaquli sida loogu baahan yahay.
Mar alla markii ay dhammaantood isku daraan, dib ugu noqo dhexdhexaad illaa 30 ilbidhiqsi oo kale.
Isku laab jajabyadaada shukulaatada ama shukulaatada
Kari 35 daqiiqo oo ah 335ºF iyadoo ku xiran hadba sida ay digsiyadaadu u weyn yihiin. Markay sii weynaato digsiga, ayaa ku sii dheereyn doonta inay dubtaan. Markuu caday ka soo baxayo xarunta oo xoogaa jajab ah ku dhegan yihiin, keeggii waa la dhammeeyaa.
Ka dib marka keegadu qaboojiso ilaa 10 daqiiqo, ama digsiyada ay qaboojiso ilaa heer la taaban karo, rogrogo keegga oo ka soo saar digsiyada sariirta qaboojinta si ay gebi ahaanba u qaboojiso. Waxaan ku daboolaa duubka balaastigga ah si aan uga ilaaliyo inay qalalaan sababta ay u qaboojiyaan.
Marka keega gabi ahaanba qaboobo waad goyn kartaa oo aad baraf ka dhigi kartaa.
Kuleylka kareemka culus ee karbaashka ah illaa uu ka bilaabmayo inuu karkariyo, ha karkarin.
Kariimkaaga kulul ku shub shukulaatada shukulaatada, adoo hubinaya inay si buuxda u quusteen.
U ogolow isku darku inuu fadhiisto 5 daqiiqo, ka dibna ku dar vanilj kaaga iyo milixda
Hoos u dhig ilaa inta uu ka siman yahay. Haddii aad haysatid qaybo shukulaato ah oo aan dhalaalin, kululee isku dar 30 ilbiriqsi oo ku jira microwave-ka oo mar labaad ku shub. Ha kululeynin badan haddii kale waad jebin kartaa ganacsiyadaada.
Ku dabool duubka balaastigga ah oo ha ku qaboojiso heerkulka qolka illaa 24 saacadood ka hor intaadan isticmaalin.
Cuntadani waxay shaqeysaa weyn oo la xardho moofo xardhan! Waxaan u isticmaalaa isla qaabka loogu talagalay arooska iyo farshaxan. Marwalba waan dubtaa, de-pan iyaga, ku duuduubaa caag ka dibna ku qaboojiyaa qaboojiyaha ama qaboojiyaha (iyadoo kuxiran inta xawaare ee aan kujiro) kadibna xardho. Keegga la qaboojiyey ayaa si aad u fudud u xardhanaya ama isku dhejinaya!
U adeegida:1g|Kalori:381kcal(19%)|Kaarboohaydraytyada:42g(14%)|Protein:5g(10%)|Dufan:22g(3. 4%)|Dufan Dufan:kow iyo tobang(55%)|Kalastarol:52mg(17%)|Sodium:211mg(9%)|Kaliumperyamper:236mg(7%)|Fiber:3g(12%)|Sonkor:25g(28%)|Vitamin A:359IU(7%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:48mg(5%)|Bir:labamg(kow iyo toban%)
sida loo sameeyo strawberries in ay ku sii dheeraadaan qaboojiyaha
kariimka jiiska kareemka kareemka jilicsan ee jilicsan
sida loo sameeyo shukulaatada ganache dhaxan
sidee u sameysaa beenta xanjada